Hawaii inotangisa chirongwa chekubaya vaccine vafambi vakabaiwa majekiseni muUS neU.S. Territories
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » USA Kuputsa Nhau » Hawaii inotangisa chirongwa chekubaya vaccine vafambi vakabaiwa majekiseni muUS neU.S. Territories
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hawaii Kupwanya Nhau • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • Kuvakazve • Resorts • Kutarisirwa • Technology • ushanyi • Tourism Kutaura • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Chirongwa ichi chinobvumidza vafambi kubayiwa majekiseni muUS neU.S.Territories kudarika chinzvimbo chega chekuzviparadzanisa nehurumende nehumboo hwejekiseni.
Vafambi vakabaiwa majekiseni muUS kana kumatunhu eUS vanogona kutora chikamu muchirongwa kutanga musi wa15th zuva mushure mechipiri chipimo chePfizer kana Moderna jekiseni kana imwe chete yeiyo joni raJohnson & Johnson.
Vafambi vanofanirwa kuunza kopi yakaoma yemapepa avo ekudzivirira kuti varatidze vanoongorora pasuwo vasati vakwira uye / kana pavanosvika muHawaii.
Saina iwo epamhepo epamutemo humbowo pane Akachengeteka Kufamba Hawaii.
Hawaii iri kupedzisa gadziriro yekutangwa kweJuly 8 ye Nyika yeHawaiichirongwa chekudzivirira hutachiwana hwevapamba, vafambi veHawaii-vakasungwa vakabaiwa majekiseni muUnited States kana US Territories. Chirongwa ichi chinobvumidza vafambi ava kupfuura chinodikanwa chehurumende yekuzviparadzanisa neuchapupu hwekudzivirira.
Vafambi vakabaiwa majekiseni muUS kana kumatunhu eUS vanogona kutora chikamu muchirongwa chekusiyira kutanga musi wa15th zuva mushure mekubata kwavo kwechipiri mushonga wePfizer kana Moderna - kana kutanga gumi neshanuth zuva mushure mekunge vagamuchira dosi imwechete yejekiseni raJohnson & Johnson.
Uye zvakare, vafambi veHawaii-vakasungwa vanofanirwa:
Isa imwe yemagwaro matatu ekudzivirira kuakaundi yavo Yakachengeteka Kufamba yeHawaii, usati waenda kuHawaii. Rimwe remagwaro anotevera anofanira kuiswa:
CDC COVID-19 Yekudzivirira Kadhi Rekodhi
VAMS (Vaccination Administration Management System) kudhindisa KANA
DOD DD Fomu 2766C
Iyo Yakachengeteka Kufamba dhijitari chikuva ikozvino yave kubvumidza jekiseni rekudhirowa gwaro kune nzendo dzinosvika muHawaii muna Chikunguru 8 uye zvichidarika.
Saina zvipupuriro zvepamhepo zvepamhepo paSafe Travels Hawaii, uchisimbisa izvo zvakadhindwa zvinyorwa ichokwadi uye ichokwadi.
Uyai nekopi yakaoma yemapepa avo ekudzivirira kuti varatidze vanoongorora pasuwo vasati vakwira uye / kana pavanosvika muHawaii. Screeners anoongorora / kuongorora magwaro ekudzivirira, machisi emifananidzo, zita uye DOB pamwe nekusimbisa kuti humbowo hwasainwa.
ONA: Vana vari pasi pemakore mashanu havadikanwe kuyedzwa uye havazogariswa kwavo vega kana vachifamba nemunhu mukuru ane pre-kufamba bvunzo kunze kana wekubaya nhomba. Vana makore mashanu zvichikwira vasina kubayiwa jekiseni vanofanirwa kutora chikamu muPre-Kufamba Yekuyedza Chirongwa uye kuyedza neVanovimbwa Vanoyedza Partner kupfuudza zvinotenderwa kwemazuva gumi ekuisa wega.
Nyika yakabudirira kuburitsa chirongwa chekubaya vaccination kune vafambi vakabayiwa mu Nyika yeHawaii, musi waJune 15.
Ichi chirongwa hachifukidze vafambi vekunze.